Ma haysaa AirPods Pro? Hagaag, waad cusbooneysiin kartaa hada | Wararka IPhone
Ma haysaa AirPods Pro? Hagaag, waad cusbooneysiin kartaa hadda
Taasi waa sida ay tahay. The Cusboonaysiinta ugu horreysa ee AirPods Pro cusub ayaa hadda la heli karaa Dhamaan isticmaaleyaasheeda, in kasta oo wararka lagu soo kordhiyay nuucaan cusub aan la caddeyn, waxaa ugu wanaagsan in markii aad muddo hesho aad ku darto cusbooneysiintan oo leh dhismo 2B588 ah.
Sameecadaha dhagaha ayaa umuuqda in aysan dhibaato heysan iyo adeegsadayaasha iyaga haysta kama cabanayaan dhibaatooyin ama cilado, sidaa darteed waxaan qiyaaseynaa inay tahay arrin Apple gudaheeda ah sidaa darteedna ay ugu fiican tahay in qaabkan cusub la dhigo sida ugu dhakhsaha badan
Sida loo rakibo cusbooneysiinta AirPods Pro
Inbadan oo idinka mid ah waxaa macquul ah inay iyagu yihiin AirPod-yada ugu horeeya ee aad heysato sidaa darteedna waxay u muuqan kartaa wax adag in la cusbooneysiiyo, wax runta ka fog ma jiraan. Si loo cusbooneysiiyo AirPods Pro, waxa kaliya ee aan sameyno waa inaan furno sanduuqa samaacadaha dhaweyd ee u dhow iPhone-ka si ay isugu xirmaan ka dibna u helaan Dejinta> Guud> Ku saabsan y AirPods Pro. Qeybtaan waa inaad ku aragtaa nambarka la dhigay bilowga maqaalka, haddii taa badalkeeda ay lambaradu u muuqato qalabka 2B584, markaa waa inaad rakibataa.
AirPods-ka cusub shaki la'aan waa mid ka mid ah aalado ay kumanaan qof sugayeen, oo leh joojinta buuqa, Habka daahfurnaanta si uu awood ugu yeesho inuu dhageysto banaanka isagoon ka saareyn dhagaha dhagaha iyo naqshada cusub ee dhegta taas oo u ogolaaneysa inaysan si sahal ah uga dhicin dhagta. Waxa kaliya ee diidmada ah ee aan ogaanno waa inay leeyihiin xoogaa qiimo sarreeya, in kasta oo faa'iidooyinka ay ku bixiso sanduuqa lacag la'aanta ah iyo inta kale ee wararka ay muujinayaan inay yihiin kuwa ugu sarreeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Ma haysaa AirPods Pro? Hagaag, waad cusbooneysiin kartaa hadda